Zon' olombelona - Wikipedia
Ny zon' olombelona dia fitsipika fototra na fenitra môraly ho an' ny fitsipika sasany mifehy ny fitondran-ten' ny olombelona izay arovan' ny lalàn' ny firenena na lalàna iraisam-pirenena. Mazàna no tsy azo ovana na esorina izy ireo, zo fototra izay tsy misaraka amin' ny olona tsirairay amin' ny maha-olombelona azy fotsiny ary tsy misaraka amin' ny olombelona rehetra, ka tsy anavahana taona, na faviana ara-poko, na toerana, na fiteny, na fivavahana, na foko, na sata hafa. Ireo zo ireo dia azo ampiharina na aiza na aiza sy amin' ny fotoana rehetra amin' ny maha an' ny olombelona rehetra azy, ary izy ireo dia manandratra ny fitoviana amin' ny maha an' ny rehetra azy. Izy ireo dia mitaky ny fiaraha-miory sy ny fanjakana tan-dalàna ary mametraka adidy amin' ny olona mba hanaja ny zon' olombelona ho an' ny hafa, ary amin' ny ankapobeny dia heverina fa tsy tokony hesorina izany raha tsy hoe vokatry ny dingana ara-drariny mifototra amin' ny toe-javatra manokana.
Ny fotopampianarana momba ny zon' olombelona dia nanan-kery lehibe teo amin' ny lalàna iraisam-pirenena sy teo amin' ny andrim-panjakana maneran-tany sy isam-paritra. Ny hetsika ataon' ny fanjakana sy ny fikambanana tsy miankina amin' ny fanjakana no fototry ny pôlitika itondrana ny fiainam-bahoaka maneran-tany. Ny hevitra momba ny zon' olombelona dia milaza fa "raha azo lazaina ho manana fiteny ara-môraly iraisana ny lahateny ampahibemaso momba ny fiarahamonina maneran-tany amin' ny fotoan' ny fandriam-pahalemana, dia momba ny zon' olombelona izany. Mbola miteraka fisalasalana sy adihevitra be ny votoaty sy ny natiora ary ny fanamarinana ny zon' olombelona mandraka androany raha heverina ny fitakiana mafy ataon' ny fotopampianarana momba ny zon' olombelona. Ny tena dikan' ny teny hoe zo dia mampiady hevitra sady lohahevitra anaovana adihevitra filôzôfika mitohy; misy anefa ny marimaritra iraisana fa ny zon' olombelona dia ahitana karazana zo maro samihafa toy ny zo amin' ny fitsarana ara-drariny, ny fiarovana amin' ny fanandevozana, ny fandrarana ny fandripahana foko, ny fahalalaham-pitenenana na zo hahazo fanabeazana, misy ny tsy fitovian-kevitra momba ny hoe iza amin' ireo zo manokana ireo no tokony hampidirina ao anatin' ny rafitra ankapoben' ny zon' olombelona; ny mpandinika sasany dia mihevitra fa ny zon' olombelona dia tokony ho fepetra faran' izay kely indrindra hialana amin' ny fanararaotana ratsy indrindra, fa ny hafa kosa mihevitra azy io ho fenitra ambony kokoa.
Maro amin' ireo hevitra fototra namelona ny hetsika momba ny zon' olombelona no novolavolaina taorian' ny Ady Lehibe Faharoa sy ny zava-nitranga tamin' ny fandripahana ny Jiosy, izay niafara tamin' ny fanekena ny Fanambarana Iraisam-Pirenena momba ny Zon' Olombelona tao Paris nataon' ny Fivoriamben' ny Firenena Mikambana tamin' ny taona 1948. Tsy nitovy ny fiheveran' ny olona fahiny ny zon' olombelona maneran-tany. Ny tena mpialoha lalana ny lahateny momba ny zon' olombelona dia ny foto-kevitra momba ny zo voajanahary izay niseho ho anisan' ny fomban-drazana ara-boajanahary tamin' ny Andro Antenatenany izay nanjary nisongadina nandritra ny Andron' ny Fahazavana, miaraka amin' ireo filôzôfa toa an' i John Locke, i Francis Hutcheson ary i Jean-Jacques Burlamaqui ary izay nisongadina tamin' ny lahateny ara-pôlitikan' ny Revolisiona Amerikana sy ny Revolisiona Frantsay. Avy amin' io fototra io no nipoiran' ny adihevitra môderina momba ny zon' olombelona tamin' ny tapany farany amin' ny taonjato faha-20, mety ho toy ny fanehoan-kevitra manoloana ny fanandevozana, ny fampijaliana, ny fandripahana olona ary ny heloka an' adin-tafika, ho toy ny fahatanterahan' ny faharefoan' ny olombelona sy ho fepetra takiana amin' ny hisian' ny fiarahamonina anjakan' ny fahamarinana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zon%27_olombelona&oldid=1041259"
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2021 amin'ny 10:26 ity pejy ity.